Oge ọkọchị na-amalite na Spain na ọdọ mmiri na 53% ikike | Network Meteorology
Oké ọkọchị na-adịwanye njọ karịa oge ọ bụla n'ihi mgbanwe ihu igwe. Spain bụ mba dị oke nfe na mmetụta nke ya. Nchịkwa mmiri bụ ihe dị oke mkpa na nke dị oke mkpa maka ọdịnihu na maka oge ọkọchị nke anyị ga-enwe ihu igwe dị elu na ebili ọkụ.
Enweghi oke mmiri ozuzo nke anyị na-adọkpụrụ na mpaghara Spanish niile kemgbe afọ ndị na-adịbeghị anya na mgbe mmiri kachasị ekpo ọkụ na ọkara narị afọ, na-eme ka anyị malite oge ọkọchị nwere ọdọ mmiri dị na 53% nke ikike ha niile. Nke a kwekọrọ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20% n'okpuru ihe anyị nwere n'oge a na 2007. Kedu ihe anyị nwere ike ime banyere nke a?
Oké ọkọchị na mmiri na-agwụ
Dabere na data sitere na Ministry of Agriculture, Food, Fisheries and Environment (Mapama), na izu ikpeazụ a nke June, nchekwa mmiri bụ 29.928 cubic hectometres, 53,5%, pasent dị nnọọ anya site na nkezi maka afọ iri, nke bụ 71,4%, na afọ gara aga, 71,7%, na ebe 2017 dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent iri abụọ n'okpuru nkezi.
Naanị otu izu kemgbe oge ọkọchị malitere, mmiri apịtị nke mmiri apịtị jiri 750 cubic hectomet belata (Nke a kwekọrọ na 1,3% nke ikike niile nke ọdọ mmiri). Osimiri Ebro bu nke nwuru oke nfu site na mbelata nke hectometres cubic 153.
N'agbanyeghị data ndị a, Mapama na-ekwusi ike na ọnụego ihe mmiri mmiri na-ebelata adịghị elu n'oge a n'afọ. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na e nweela mmiri ozuzo n'izu ndị a, na, karịa ihe niile, oriri mmiri abanyela n'ọtụtụ ebe, a machibidodị ha n'ime ọdọ mmiri ụfọdụ n'ihi ọnọdụ anyị hụrụ onwe anyị na ya.
Ọ bụ ọnụ ọgụgụ dị ala ma ọ bụrụ na mmadụ echebara na ọrụ kachasị nke mmiri mmiri Spen na-ewere ọnọdụ na ụbọchị ndị a, ozugbo ọgbụgba ahụ kwubiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » Oge ọkọchị na-amalite na Spain na ọdọ mmiri na 53% ikike